Akwụkwọ Rajneesh Kumar na Martech Zone |
Edemede site na Rajneesh Kumar kwuru
Rajneesh Kumar kwuru
Onye na-ere ahịa dijitalụ na onye na-eto eto, Rajneesh Kumar bụ ugbu a bụ isi ahịa ahịa dijitalụ na Pimcore Global Services. Pimcore bụ ihe ntinye aka na-emeri nke mepere emepe maka isi data njikwa (PIM / MDM), njikwa ahụmịhe onye ọrụ (CMS / UX), njikwa akụ dijitalụ (DAM) na eCommerce.
Tọzdee, Disemba 17, 2020 Tọzdee, Disemba 17, 2020 Rajneesh Kumar kwuru
Ọrịa na-efe efe nke COVID-19 ewepụtala igwe ojii nke enweghị mgbagwoju anya na mpaghara azụmaahịa ma bute mmechi nke ọtụtụ ọrụ akụ na ụba. N'ihi nke a, o yikarịrị ka ụlọ ọrụ achụmnta ego ọ ga-ahụ mgbanwe mgbanwe n'agbụ, usoro ọrụ, omume ndị ahịa, yana ịzụ ahịa na ịzụ ahịa. Ọ dị mkpa ịme ihe iji mee ka azụmahịa gị nọrọ n'ọnọdụ echedo ma mee ka usoro mgbake ahụ dị ngwa. Achọpụta azụmaahịa nwere ike ịga ogologo oge na-agbanwe agbanwe na atụmanya